သင်္ဃန်းကျွန်းကိုရောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ၁၀၀ ကျော်ကို ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းထိပ်တန်းသတင်းများ
သင်္ဃန်းကျွန်းကိုရောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ၁၀၀ ကျော်...
22 มี.ค. 2563 - 09:26 น.
(၁) သင်္ဃန်းကျွန်းကိုရောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ၁၀၀ ကျော်ကို ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မယ်
ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ထဲက နေအိမ်နှစ်လုံးမှာ ရောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ၁၁၈ ဦးကို အဲဒီနေအိမ်တွေကနေ အပြင်မထွက်စေဘဲ ၁၄ ရက် စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းမယ်လို့ သင်္ဃန်းကျွန်းအမတ် ဦးမောင်မောင်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မနေ့ညပိုင်းက သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကမာကြည်တံတားအဆင်း ပန်းဝါလမ်းနဲ့ နှင်းဆီလမ်းက နေအိမ်နှစ်လုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာ လဝက ကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီး နေထိုင်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ သတ်မှတ်အရေအတွက် ထက် ပိုနေနေတယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အာဏာပိုင်တွေက မနေ့က ည ၉ နာရီကျော်မှာ အဲဒီအိမ်တွေကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ပန်းဝါလမ်းနေအိမ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသား ၅၄ ဦး၊ နှင်းဆီးလမ်နေအိမ်မှာ ၆၄ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ၁၁၈ ဦး တွေ့ရတယ်လို့ ဦးမောင်မောင်ဦးကပြောပါတယ်။
"သူတို့အကုန်လုံးကတော့ ပတ်စ်ပို့ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ လဝကကို တိုင်ထားတဲ့အရေအတွက်နဲ့ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့အရေအတွက်က ကွာဟနေတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဒီလူတွေအကုန်လုံးကို အိမ်တွေမှာပဲ စောင့်ကြည့်မယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနက အပူချိန်တိုင်းတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့အားလုံးက ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က လာတာတွေရှိတယ်။ ကြိုရောက်တာတွေလည်းရှိတယ်။ အကုန်လုံးက တရုတ်ကနေ လေဆိပ်ကနေ တိုက်ရိုက်လာတာပါ။ ခိုးဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့တွေ့ရတယ်။ ခွင့်ပြုချက်က ၃၆ ယောက်ပဲ လဝကကို အသိပေးထားတာ။ ကျန်တာတွေက လဝကကို အသိမပေးထားဘူးလို့ တွေ့ရတယ်" လို့ ဦးမောင်မောင်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေဟာ One by One အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကုမ္ပဏီအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲရေးဖို့ ရောက် လာတာလို့ စကားပြန်ကတစ်ဆင့် သိရတယ်လို့ ဦးမောင်မောင်ဦးက ဆက်ပြောပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီကို ဘယ်သူပိုင် တယ်ဆိုတာတော့ တပ်အပ်မပြောနိုင်ပေမယ့် အခုတရုတ်တွေကိုအိမ်ငှားပေးထားတာကတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားနှစ်ဦးလို့ သိရတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေကို ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးရင်ရော ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးမောင်င်ဦးက
"လဝက ဥပဒေအရတော့ ဆက်လုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - လူငယ်တွေလည်း သတိထားဖို့ WHO သတိပေး
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ကိုဗစ်-၁၉ ကို ဘယ်လိုကာကွယ်နေထိုင်မလဲ
ဒီတရုတ်တွေအများစုဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဟူပေပြည်နယ်က မဟုတ်ဘဲ ယူနန်ဘက်က အများဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ဦးမောင်မောင်ဦးက ရှင်းပြပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ မြန်မာက ဟူပေကလာသူတွေအားလုံးကို ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့တာ တစ်ပတ်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ညက အဲဒီဖြစ်စဉ်ကို သတင်းယူတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို အိမ်ထဲနေသူတွေက သတင်းဓာတ်ပုံမရိုက်ဖို့ တားဆီးတာ၊ ရေနဲ့ပက်တာ စတဲ့ သတင်းယူတာကို တားဆီးခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်လို့ မြေပြင်သတင်းသွားယူတဲ့ သတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်။
(၂) ဂျက်မားက မြန်မာအပါအဝင် ဆယ်နိုင်ငံကို ကိုဗစ်၁၉ကာကွယ်ရေး ပစစည်းတွေထောက်ပံ့မယ်။
တရုတ်ဘီလျံနာ ဂျက်မားက မြန်မာအပါအဝင် အာရှဒေသတွင်း ဆယ်နိုင်ငံကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်ရေး အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ JetMa foundation ရဲ့ တွစ်တာစာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နှာခေါင်းစည်း ၁ ဒသမ ၈ သန်း၊ ရောဂါစမ်းသပ်ရေးကိရိယာ test Kit အခု နှစ်သိန်းကျော်၊ ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ သုံးသိန်းခွဲကျော်၊ အသက်ရှူစက်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာတွေကို အဲဒီဆယ်နိုင်ငံကို လှူဒါန်းမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုချိန်မှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေချောမွေ့မြန်ဆန်ဖို့ မလွယ်ကူပေမယ့်လည်း ဒါကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်မယ်လို့လည်း ဂျက်မားဖောင်ဒေးရှင်းက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မော်လ်ဒိုက်၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ နိပေါ၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ သီရိလင်္ကာတို့ကို ဒီပစ္စည်းတွေ ခွဲဝေလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆယ်နိုင်ငံထဲမှာ ခုထိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မတွေ့ရသေးတဲ့နိုင်ငံက မတ်လ ၂၂ ရက်မနက်ထိ မြန်မာနဲ့ လာအိုတို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဂျက်မားနဲ့ သူ့ရဲ့ အွန်လိုင်းဈေးရောင်ကုမ္ပဏီ အလီဘာဘာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ထိုင်းတို့ကိုလည်း နှာခေါင်းစည်း၊ test kit၊ ရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံနဲ့ မျက်နှာကာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ သန်းနဲ့ချီ လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သူ့ တွစ်တာမှာရေးထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ သင်္ဃန်းကျွန်းကိုရောက်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ၁၀၀ ကျော်ကို ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းထိပ်တန်းသတင်းများ